समानान्तर Samanantar: August 2012
जिन्दगीको पहिलो आर्जन उसले प्रेयसीका लागि समर्पित गर्ने अठोट गर्‍यो। जाडो बैंसमा थियो। उनको पछ्यौराभन्दा राम्रो उपहार अरू के हुन्थ्यो र? बजारमा पाएसम्मको राम्रोे कास्मिरी सल किन्यो। सल छुँदा पनि उसलाई काउकुती लाग्यो। पैसा तिरेर पसलबाहिर निस्कने बेलामा सम्झ्यो घरमा त जाडोमा लगलग कामेर घरधन्दा गर्दै बाँचेकी आमा बुढी पनि छिन्। पसलमा फर्क्यो र पाएसम्म सस्तो अर्को पछ्यौरा पनि किन्यो। पसलेले भन्यो - 'नौकर्नीको लिए तो काम चलिजान्छ हजुर'
हतारिएर घर पुग्यो। अनुहार र आँखामा भएसम्मको बैंस समेटेर कोठामा पत्नीको अगाडि उभियो। निकै आकर्षक ढंगले पछेउरा फुकालेर ओडाइदियो। पत्नीले पछेउरा हेरी। छामी। आँखाभरि उपेक्षा भरेर पुलुक्क उसको अनुहार हेरेर नाक, मुख, आँखीभौँ खुम्च्याई। ऊ खिसि्रक्क पर्‍यो। मन अमिलिए पनि हाँस्ने कोसिस गर्दै भान्सामा कोठामा गयो। आमा सधैँजस्तै केके केलाउँदै थिइन्। पछ्यौराको पोको आमाको पोल्टामा पर्ने गरी फ्यात्त फालिदियो। आमाले पोको फुकाइन्। पछ्यौरा छातीमा टाँसिन् र ओडिन्। डबडबाउँदा आँखा पारेर आमाले भनिन् - 'मेरो बाबाको पहिलो कमाइ !'
उसलाई धेरै बेरसम्म लागिरह्यो पछ्यौरा नसाँटेकोमा थकथकी लागिरह्यो ।
( २०४४ साल चैत)
Posted by Govinda at 8/30/2012 01:37:00 PM No comments:
आमाको लास चितामा राख्नु अगाडि लुगा र गहना फुकाइदिन भनियो। लुगा त सजिलै फुकालियो तर गहना फुकाल्न गाह्रो भयो। माघको जाडो, नदीको तिर, आधिरात । हातमात्र हैन शरीर पनि लगलग कामेको थियो। गहना खासै केही थिएनन् - फूली, ढुंग्री र मारबाडी मुन्द्री। ढुंग्री सजिलै फुक्ल्यो। मारबाडी अलि मोटै थियो। फुकाल्न पनि गाह्रै भयो। बेर लागेको देखेर नजिकैका सज्जनले सम्झाए 'अलि बल गरेर तान न ! दुख्ने हैन क्यारे। अहिल्यै पोल्ने शरीरको के माया?' नभन्दै अलि बल गर्नेबित्तिकै मुन्द्री फुक्ल्यो। फूलीको पालो आयो। फूली फुकाल्न झन् गाह्रो भयो। सानो टुक्रा समात्नै नमिल्ने। नाकको प्वालभित्र पेच फुकाउनु पर्ने। बेर लाग्ने देखेर तिनै सज्जनले फेरि भने ' बाबु ! आमा त मरेर गइन्। जाबो फूलीको के मोह? सुन हो, अपवित्र हुँदैन। लाससँगै जलाइदिए हुन्छ।'
(करिब २५ वर्ष पहिले लेखेका लघु कथा भेिटए । जाँगर चले ल्बगमा राखौँला ।)
Posted by Govinda at 8/28/2012 02:39:00 PM 1 comment:
यस्तै रहे, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'सुशील कोइराला राजा फर्काउन चाहन्छन्, त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नमानेका हुन्' भन्ने प्रचार कुनै पनि क्षण सुरु गर्नेछन्। नेपालका राजनीतिक नेतामध्ये दाहाल 'ढाँट शिरोमणि' जो सिद्ध भएका छन्। दाहाल जति छिटो छिटो र धेरै कुरा फेर्ने अरू कुनै नेता देखिएका छैनन्। आश्चर्य, यसैलाई दाहालका गुमस्ताले उनको 'गतिशीलता' भन्ने गरेका छन्।
दाहालले 'कांग्रेसले संघीयता नमानेकाले संविधान बनेन' भनेर संविधान बन्न नसक्नुको सबै दोष नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको थाप्लामा हालिदिएका छन्। त्यसमाथि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा त संविधान सभा जोगाउन तयार थिए तर कोइराला मान्दै मानेनन् भन्ने पनि प्रचार गरेका छन्। कांग्रेसका मन्दबुद्धि नेता भने दाहालले खेलाएको होसै नपाएर हो कि कोइरालाका कारण हैन, दाहालहरूको 'सर्वसत्तावादी' चाहनाले संविधान बन्न नसकेको यथार्थ जनतालाई बुझाउन तयार छैनन्। केही पहिले संविधान सभा रहँदासम्म दाहालले यसरी नै सुशील कोइरालालाई खेलाएका थिए। 'कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ' भन्ने गुलियो वचन सुनेकै भरमा उनले आफ्ना निकटतम सहयोगी कृष्ण सिटौलालाई माओवादीको सरकारमा मन्त्री बनाए र माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भन्ने नैतिक शक्ति गुमाए। कोइराला सांसद थिएनन्। संविधानमा सांसदमात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। अर्थात्, कोइराला प्रधानमन्त्री हुने वैध उपाय थिएन। माधवकुमार नेपाललाई संसद्मा पुर्या।एरै पछुताएका माओवादी नेता सजिलै कोइरालालाई सांसद बनाउने पक्षमा पक्कै थिएनन्। यसैले सुशील कोइरालालाई आजीवन प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिए पनि हुन्थ्यो। मुखको बाबुको जान्छ के?
अहिले जातीय संघीयता स्वीकार नगरेकाले कांग्रेस र नेकपा (एमाले)विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपरेको प्रचारवाजी दाहालले गरिरहेका छन्। उनले कांग्रेस र एमालेलाई पनि मोर्चा बनाउन सल्लाह दिएका छन्। दाहालको दुर्नियत कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बुझेका छन् कि छैनन्? थाहा छैन। जनताले भने बुझेका छन्। मधेसका अनगिन्ती टुत्रे्क पार्टीको मोर्चाको हैसियतमा कांग्रेस र एमालेलाई खसाउन पाए दाहालको एक छत्र राज गर्ने अभीष्ट सहजै पूरा हुन्छ।
निर्वाचित संस्था नहुँदा पार्टीको हैसियत उसको देशव्यापी उपस्थितिका आधारमा तय हुनुपर्छ। दाहाल नेतृत्वको मोर्चामा माओवादीको पार्टीबाहेक अरू कुनै पनि दलको देशव्यापी उपस्थिति छैन। सत्तारुढ गठबन्धन विरोधी कांग्रेस र एमालेमात्र हैन, रष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीलगायत्का दलहरूको देशव्यापी अस्तित्व छ। कमजोर होला तर उपस्थिति त छ। यसैले दाहालको मोर्चा र यी प्रत्येक दलको राजनीतिक हैसियत बराबर हुन्छ। अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म पुरानै जनमतलाई आधार मान्ने हो भने पनि माओवादी र सबै मधेसी दल फुटिसकेका छन्। यस आधारमा पनि मोर्चाको हैसियत कांग्रेस र एमालेको भन्दा ठूलो मान्न सकिँदैन। यसैले मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेलाई खुम्च्याउने प्रयासमात्रै हो। यो सम्भवतः राष्ट्रपतिलाई तर्साउने रणनीति पनि हो। दाहाललाई 'पाटने ६ प्रधान' जस्तै 'किङ मेकर' हुने रहर हुनसक्छ। विगतमा झलनाथ खनाललाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो 'शक्ति' देखाइसकेका जो छन्। अब पनि त्यही रहर गर्नु 'अपराध' हैन।
व्यक्तिका आकांक्षा, कुण्ठा र ग्रन्थी पूरा होउन् वा फुकुन् भनेर समय पर्खेर बस्दो रहेनछ। दाहालका हकमा पनि त्यस्तै भएको छ। उनले मोर्चाबन्दीबाट शक्ति हासिल गरेको ठानेका छन्। साथै, त्यो शक्ति दार्शनिकमात्र भौतिक अर्थमा समेत कति 'क्षण भंगुर' र 'अनित्य' छ भन्ने ज्ञान पाउन उनले अब सुकदेव मुनिबाटै ज्ञान पाउन पक्कै परोइन। यसैले चार जनाले नपत्याउने र दुई दिन पनि नटिक्ने प्रचारवाजीमा रमाएर मुलुक बर्बाद पार्ने जिद्दी पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नगर्नु नै बेस हुनेछ।
रह्यो सुशील कोइरालाले संविधान बन्न दिएनन् भन्ने प्रचारवाजी! यो त झन् कसैले पनि पत्याउँदैन। शायद, दाहाल आफैँलाई पनि यसो भनिरहँदा हाँसो उठ्दो हो। कोइरालामा त्यति गर्नसक्ने क्षमता भइदिएको भए मुलुकको यस्तो दुर्गति हुने नै थिएन। बाह्र बुँदे सहमति र त्यसका आधारमा माओवादीलाई कांग्रेसले विशेषगरी गिरिजाबाबुले काँधमा चडाएकोमा सुशीलको असन्तुष्टि बेलाबखत प्रकट भइरहेको थियो। तर, जब पार्टी हाँक्ने बेला आयो, उनले गिरिजाबाबुलाई गलत बाटोमा जान सल्लाह दिनेहरूलाई नै सारथि बनाए। उनको इच्छाशक्ति कति कमजोर छ भन्ने पोल त यसैले खोलेको छ। कथम्, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री हुन दिइने भयो भने पनि कोइराला सरकारको नेतृत्व गर्न तयार होलान् भन्नेमा दुविधै छ। यस्तै, कांग्रेसका अरू प्रधानमन्त्री भए पनि उनका लागि प्रिय हुने छैन। सुशील गिरिजाबाबुका भाइ भए पनि उनमा दाजुको जस्तो आँट र इच्छा शक्ति छैन।
इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीप्रति सुशील कोइराला साँच्चै नै सजग र गम्भीर छन् भने उनले शाब्दिकरूपमा 'प्रतिगमन'को बाटो रोज्ने आँट गर्नुपर्छ। प्रतिगमनको एउटा अर्थ अगाडि बढ्नुको साटो विपरीत दिशातर्फ लाग्नु भन्ने पनि हुँदो रहेछ। यही अर्थमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमन रोज्नुपर्छ र केही वर्ष हैन, सात दशक पछि फर्कनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले २००७ मा गरेको उद्घोषमै अडिग रहनुपर्छ। कारण, ती वाचा अधुरै छन्।
मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त भएकाले 'महाराजाधिराजको वैधानिक नायकत्व' त सन्दर्भहीन भइसकेको छ तर २००७ सालको घोषणाका मूल काम बाँकी नै छन्। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, १९५० हेर्दा मूलतः 'जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित विधानअनुसार ...' शासन चलाउने र 'समानता र इन्साफका आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनर्निर्माण' गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार देखिन्छन्।
'जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित विधानअनुसार ...' शासन चलाउने व्यवस्थाका लागि संविधान सभाकै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस द्विविधामा पर्नुहुँदैन। निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतासँग कांग्रेसले सम्झौता गर्नु हुँदैन। आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन होस् भन्नुभन्दा चुनावलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन कांग्रेसले बढी जोड दिनुपर्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन। माओवादी बिच्किएलान् र शान्ति प्रक्रिया विफल होला भन्ने भयले जताततै सम्झौता गरियो। अब त्यस्तो हुनुहुँदैन। निष्पक्षता सुनिश्चित नहुँदासम्म कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गरे हुन्छ तर गलत जनमतलाई मान्यता दिनुहुँदैन।
'समानता र इन्साफका आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनर्निर्माण' पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कांग्रेसले लामो समय सत्ता पाएका बेलामा पुँजीवादी चिन्तनलाई उदार लोकतन्त्र ठान्ने भुल गर्यो। अब त्यसलाई सच्याउन सक्छ। माओवादीले अपनाएको आर्थिक नीति 'बक्सिसे पुँजीवाद' (क्रोनी क्यापिटलिज्म) हो। सत्ताधारीको तजबिजमा राज्यको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट गर्ने नीति यसको सार हो। अहिलेका जातिवादी मुखियाहरू राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्न र गरिबलाई पहुँचमा पुग्नै नदिन विभिन्न अनुहारमा क्रियाशील भएका छन्। यसलाई सफल हुन नदिन नेपाली कांग्रेसले समानता र न्याय कायम गर्ने अर्थतन्त्रको खाका कोर्नुपर्छ।
विकास न्यायपूर्ण र दिगो हुन ठाउँ सुहाउँदो हुनुपर्छ। राज्यले कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिने पद्धति निर्माण हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि स्रोत जुटाउन आवश्यक भए सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ। कांग्रेस अगाडि नसरे अरूले यसो गर्ने आँट गर्ने छैनन्। इक्वेडरको संविधानमा प्रकृतिको बाँच्ने अधिकार पनि मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ। नेपालका लागि त्यो महत्वपूर्ण पाठ हुनसक्छ। अब चुनावमा जाँदा यस्ता विषयमा जनादेश माग्ने हो भने कांग्रेसले जनताको विवेक जगाउन सक्छ। लगानीको प्राथमिकता न्याय र विवेकसम्मत हुनुपर्छ। राजधानीका सम्भ्रान्तको हित हेरेर जनताको भलो हुँदैन। जनताको भलो नभए कांग्रेसको पनि हित हुँदैन। कांग्रेसले जनहितकारी आर्थिक र सामाजिक नीति तय गर्नुपर्छ।
संविधानमै स्थानीय स्रोतसाधनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित भएमात्र संघीयता सार्थक हुन्छ। नेपालजस्तो विविधता भएको समाजमा संघीयता सफल हुन संसदीय पद्धति आवश्यक हुन्छ। नेपालले अमेरिकी हैन, क्यानाडेली संघीयता अनुकरण गर्नुपर्छ। अब त, कांग्रेस संसदीय प्रणालीका पक्षमा उभिन हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन! यसैले नेपाली कांग्रेसले 'प्रतिगमन' रोज्नैपर्छ। तैपनि, विध्वंश, विग्रह र आतंकको पर्याय बनेको दुई शताब्दी पुरानो विचार बोकेर हिँडेका पुष्पकमलहरूभन्दा त अग्रगामी नै हुनेछ।
Posted by Govinda at 8/28/2012 11:59:00 AM No comments:
भारतका प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाडियाले 'न्यायाधीशले मुलुकमा शासन गर्नु हुँदैन' भनेका छन्। संवैधानिक संरचनाको विधिशास्त्र विषयमा इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा प्रवचन दिने क्रममा शनिबार उनले भने -'न्यायाधीशले यो मुलुकको शासन गर्ने होइन। हामीले सिद्धान्तको दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्याका क्रममा शासनमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। हामी जनताप्रति उत्तरदायी छैनौ। वस्तुगतता, निश्चितताजस्ता संविधानले प्रतिपादन गरेका आधारभूत सिद्धान्तलाई बढी महत्व दिनुपर्छ। हालै सुत्न पाउनुलाई मौलिक अधिकार ठहर गरिएको फैसलाको उनले उदाहरण दिएका थिए। जीवनको अधिकारमा वातावरण संरक्षण, मर्यादित जीवन यापनको अधिकारजस्ता अधिकारसँगै अब सुत्न पाउने अधिकार पनि थपिएको छ।' उनले न्यायाधीशहरुलाई निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्छ कि सक्तैनन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सल्लाह दिए।
न्यायाधीश कचत सक्रिय हुने भन्ने विषयमा विवाद छ। कतिपय अवस्थामा सरकार र संसद्ले गर्न नसकेको न्याय अदालतले दिएको छ। यस्तै, कतिपय अवस्थामा भने न्यायाधीशको सक्रियताले विवाद पनि निम्त्याएको छ। न्यायको सर्वमान्य मान्यताविपरीत कतिपय न्यायाधीशले वादीले नमागेको विषयमा फैसलामा बोलेका छन्। नेपाल पनि यस प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन।
केही यता न्यायाधीशले भ्रष्टाचारको मुद्दामा न्यायिक मन प्रयोग गर्नै नसक्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ भने अर्कातिर कर्तव्य ज्यानमा सजाय पाएका अपराधीसम्बन्धी न्यायालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर सरकारले सोझै न्यायालयलाई चुनौती दिएको छ। नेपालमा कानुन व्यवसायीले यस्ता विषयलाई राजनीतिक आग्रह नराखी बिरलै उठाउने गरेका छन्। के यो बौद्धिक अधोपतनको लक्षण हो? अर्थात्, राज्यमात्र हैन नागरिक समाज पनि असफल हुने दौडमा लागेको हो?
Posted by Govinda at 8/25/2012 06:40:00 PM No comments:
जनयुद्ध’ के बाद नेपाली माओवादी जंगल से शहर की ओर आ तो गए, पर उन्होंने शहर को ही जंगल बना दिया। जहां भी किसी कमजोर की जोरू, जमीन-जायदाद, उद्योग-व्यवसाय पर उनकी नजर पड़ी, वह माओवादियों की हो गई। इस संपत्ति हरण को लेकर माओवादी नेता आपस में भिड़ने लगे। आज भी नेपाल के अधिकतर लोग अपनी संपत्ति वापसी की राह देख रहे हैं।
़़़भारत के बैंकों, जमीन-जायदाद कारोबार और ‘इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस’ में पड़ोसी देशों का भरपूर काला धन छिपाया गया है। भारत में बाहरी देशों का काला धन कितना जमा है, यह सचमुच शोध का विषय है। सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार की क्या कोई जवाबदेही बनती है? भारत सरकार को उत्तर देना चाहिए कि नेपाल का काला धन हिंदुस्तान होते हुए स्विट्जरलैंड कैसे गया। एक बड़ा सवाल यह भी है कि नेपाली माओवादियों को भ्रष्ट करने में क्या भारत का भी हाथ रहा है?
हिन्दी दैनिक जनसत्ताको अनलाइन संस्करणमा २२ अगस्त २०१२ मा प्रकाशित ' माओवाद के नाम पर' लेखबाट साभार
Posted by Govinda at 8/22/2012 07:02:00 PM No comments:
नेपाल प्रहरीका नायब प्रहरी उपरीक्षक (डीएसपी) दीप शमशेर राणालाई फेसबुकमा नेकपा (एमाले)का नेताविरुद्ध टिप्पणी गरेकोमा कारबाही स्वरूप सरुवा गरिएको छ। भारतमा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका नेता राज श्रीकान्त थाकरेलाई सार्वजनिकरूपमा 'गुलाबको फूल' दिने प्रहरी कन्सटेबल प्रमोद तावडेमाथि कारबाही हुनसक्ने समाचार दी टाइम्स अफ इन्डियाले अनलाइन संस्करणमा दिएको छ।
उपरीक्षक राणाले एमालेको भातृसंस्था युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले एक जना प्रहरीलाई मसालको राँकोले झोसेको तस्बिरमा आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए। डीएसपी राणाले टिप्पणी गरेको तस्बिरको आधिकारितामा सन्देह गरेर त्यो कम्प्युटरबाट तयार गरिएको आरोप पनि बस्नेतले लगाएका थिए। पछि एएफपीका फोटो पत्रकार प्रकाश माथेमाले त्यो तस्बिर आफूले खिचेको पुष्टि गरे। प्रहरी जवानलाई आगो झोस्ने बस्नेतलाई राणाले 'राक्षस' लेखेेका छन्। राणालाई उनको संगठनले कारबाही गरे पनि उनका प्रति जनसमर्थन बढेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूको प्रतिक्रियालाई जनमतको आधार मान्ने हो भने सायद रमेश खरेलपछि सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै प्रशंसा र समर्थन पाउने प्रहरी अधिकृत दीप राणा नै भएका छन्।
भारतमा प्रमोद तावडेमाथि यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म कारबाही गएको समाचार सार्वजनिक भएको छैन। राज थाकरेले केही दिन पहिले उत्तरपूर्वमा भएको जातीय दंगापछि तनाव ग्रस्त मुम्बईमा प्रहरीको भूमिकाको सराहना गरेका थिए। थाकरेलाई मुम्बईका दबंग 'नेता' मानिन्छ। महाराष्ट्रमा विशेष प्रभाव भएको हिन्दु अतिवादी संगठन शिव सेनाका प्रमुख बाल थाकरेका कुनै बेला उत्तराधिकारी मानिने राजले विरोध प्रदर्शनमा अपेक्षाकृत सन्तुलित भाषण गरेकोमा लेखिका शोभा डेले ट्विट गरेर आश्चर्य मिश्रित प्रसंशा गरेकी थिइन्। तिनै राज थाकरेले प्रहरीको मनोबल बढाउने भाषण गरेपछि मन थाम्न नसकेर फूल अर्पण गरेको प्रतिक्रिया कन्सटेबल तावडेले दिएका छन्। दी टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार राजलाई फूल दिँदा आफूमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने जानीजानी आँट गरेको तावडेले बताएका छन्।
दुवै देशमा प्रहरीमाथि संगठनभित्रैबाट सामान्यतः सही देिखने काम गर्दा पनि कारबाही हुने गरेको देखियो। दुवै घटनाका पात्र प्रहरीले आवेग थाम्न सकेनन्। प्रहरी संयमित हुनुपर्छ । यो भन्नमात्र सजिलो छ । यी दुवै घटनामा हृदयहीन व्यक्तिबाहेक अरू सबैले यस्तै व्यवहार त गर्थे होलान् । मातहतका सहयोगीमाथि आगो झोसेको देख्दा पनि रिस त साधुलाई मात्र । नत्र अरूले सहन सक्तैनन् । यस्तै, सबैले दुत्कारेका बेला आफूलगायत संगठनको सराहना भएको सुन्दा खुसी नहुन पनि मन जित्नुुपर्छ।
प्रहरी भावुक र आक्रोशित हुन हुन्छ कि हुँदैन ? भावना व्यक्त गरेबापत सजाय दिने कि नदिने ? राणालाई सरुवा गर्दा प्रहरी मनोबल कमजोर हुन्छ कि हुदैन ? राणाको सरुवा र बस्नेतमाथि मुद्दा सँगै हुनु पर्ने थियो कि ? सामाजिक संजालमै सही छलफल हुनु राम्रै होला ।
जेहाेस्, राणा र तावडेले कारबाही भोग्दै रहुन् तर यीभित्रको जीउँदो मानिस पनि बाँची रहोस्। नत्र, मानिस र मेसिनमा के फरक हुन्छ र?
Posted by Govinda at 8/22/2012 10:49:00 AM No comments:
Posted by Govinda at 8/21/2012 08:43:00 PM No comments:
राजनीति र नियति दुवै नेपाली कांग्रेसका विपक्षमा भएकाले हो कि कांग्रेसजनको मति पनि बिग्रेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पुनरावलोकनको माग गर्यो। पार्टीले त्यस्तो विषयमा यस्तो निर्णय गरेको सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक हो कि? त्यही निर्णयका आधारमा 'नेपाली कांग्रेस बदनाम' अभियान चलाइएको छ। विशेषगरी नयाँ पुस्ताबीच लोकप्रिय भनिएका सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणी हेर्दा त कांग्रेस हुनु नै अपराध वा कलंक पो रहेछ कि भन्ने भान पर्छ। अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे व्यक्ति विशेषले पुनरावेदन, पुनरावलोकन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसैले कांग्रेसको त्यही निर्णयलाई 'भ्रष्टाचारको समर्थन' का अर्थमा लिनु वा प्रचारवाजी गर्नु आवश्यक र उपयुक्त थिएन। यत्तिकैमा सिंगो कांग्रेसलाई भ्रष्ट भन्नु आधुनिक नेपालको निर्माणमा कांग्रेसको गुन बिर्सेर कृतघ्न हुनु हो। बैगुनी व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र कसैको पनि भलो हुँदैन।
हुन त, कांग्रेसजनले खड्कालगायत्का नेतामाथि लगाइएको आरोप र गरिएको कारबाहीलाई पूर्वाग्रही देख्नु अस्वाभाविक होइन। यत्ति हो, उनीहरूले दोषी खुट्याउन सकेनन्। अहिले कांग्रेस नेतामाथि गरिएको कारबाही गलत हो भने त्यसमा सर्वोच्च अदालत हैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी हो। 'पूर्वाग्रही भएर छानबिन गर्ने' र 'मुद्दा चलाउने' त अख्तियार हो नि! कांग्रेसजनले खड्काको नैतिक समर्थन गरे हुन्छ तर अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्नु उचित होइन। अदालतलाई पूर्वाग्रही भन्नु पनि विवेक र नीतिसम्मत हुँदैन। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको संस्कार र इतिहासको मर्यादा जोगाउनै पनि यस्तो निर्णय गर्नु हुने थिएन। वास्तवमा नेपालको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन र अभियोजन संयन्त्रको संरचना गलत छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी र कानुन व्यवसायी कसैले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अभियुक्तले सफाइका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्ने कानुनको दोष देखेका छैनन्। (यो ऐन बनाउने बेलैमा मैले लेखेको थिएँ - भष्मासुरलाई वरदान दिएजस्तै हुनेछ। अन्ततः त्यही भयो।) यस प्रकारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरको नैतिकता र इमानदारी आवश्यक हुन्थ्यो। तर, कांग्रेस सरकारकै पालामा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नियुक्त सूर्यनाथ उपध्याय त्यस कसीमा सही पात्र थिएनन्। कांग्रेसप्रति उनी राजनीतिक आस्थाकै आधारमा पूर्वाग्रही थिए। तैपनि, किन छानिए? रहस्यको विषय छ। उनको नियतै गलत भएको त बीबीसीमा दिएको अन्तर्वार्तामा 'बदनाम' मात्र गर्न पाए आफूलाई पुग्ने भनेकैले पुष्टि गरेको थियो। प्रतिशोध र पूर्वाग्रहयुक्त उनको त्यो कथन न्यायिक निकाय प्रमुख सुहाउँदो थिएन। (नेपाली कांग्रेसका नेताले त्यतिबेलै विरोध गर्नुपर्थ्यो । उतिबेला यीमध्ये धेरैले काखी ठोकेर बसे। अनि अहिले रोएर हुन्छ? नेपालगन्जमै केही नेतालाई भ्रष्ट भनेर बदनाम गराइएको थियो। पार्टीले त्यसको तत्काल छानबिन गरेर तह लगाएको भए अहिले यो आरोप यति गह्रुंगो हुने पनि थिएन। जीउँदो रहन त कलंक थप्ने हैन, पखाल्ने काममा लाग्नुपर्छ।)
राजनीति गर्नेहरूमा बढी नै महत्वाकांक्षा जाग्यो र विलासको लत बस्यो। त्यसका लागि पैसा चाहियो। शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी गराउने पञ्चायतको चलन दोहोर्यादइयो। विडम्बना, त्यो सुन तस्करी रोक्ने गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो तर संसदीय समितिले तस्करको मतियार ठानेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएन। सञ्चारकर्मी र सामाजिक अगुवाले पनि प्रश्न उठाएनन्। कांग्रेस नेताहरूलाई जसरी पनि भ्रष्ट ठहर गर्न लागेका सञ्चारकर्मी र अख्तियारका पदाधिकारीलगायत्को आर्थिक हैसियतको अध्ययन गरियो भने तिनको मिलोमतो स्पष्ट हुनेछ। त्यतिमात्र हैन, तस्करसँगको तिनको सम्बन्ध पनि सतहमा आउनेछ। कांग्रेसकै केही नेताका नजिकका व्यक्ति सूर्यनाथका पनि निकट सहयोगी हुन पुगेका थिए। यस्ता सम्बन्धहरूबारे खोतल्ने काम कसैले पनि कहिल्यै गरेन।
अहिले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेबित्तिकै पत्याउने र खेदेर बहादुरी देखाउने प्रवृत्ति सञ्चारकर्मीमा छ। जनमानसमा त्यो संस्कृति नै बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि प्रमाणै नभए पनि न्यायाधीशले सफाई दिन नसक्ने परिवेश निर्माण भएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि व्यक्तिलाई समाजले नै अपराधी घोषित गरिदिन्छ। न्यायाधीशले इन्साफ गर्नसक्ने अवस्था छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुद्दैपिच्छे बेग्लाबेग्लै नजिर कायम हुनुले पनि मुद्दा निर्णय हुँदा न्यायाधीशको वैयक्तिक आग्रह प्रभावकारी भएको सन्देह बलियो हुन्छ। कमजोर तथा आग्रहयुक्त अभियोजन र तजबिजी कानुन भएको मुलुकमा न्याय दुर्लभ हुन्छ। यसैले कानुन बनाउँदैमा विचार पुर्यािउनुपर्थ्यो।
भ्रष्टाचार राज्यले पक्कै पनि सहन सत्तै्कन। यसैले भ्रष्टाचार कम गर्न विधि र निषेधका दुवै उपाय अपनाउनुपर्छ। व्यक्तिलाई सजाय गर्नुपर्छ तर राजनीतिक दलहरूलाई 'पापको कमाइ'बाट चलाउँदासम्म मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैन। संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहुन्जेल शासकीय भ्रष्टाचार कम हुन सत्तै्कन। कानुनकै आधारमा त नक्कली लडाकुका नाममा लिइएको निकासा एनेकपा (माओवादी)का सबैजसो प्रमुख नेतालाई ‰यालखानामा हाल्न पुग्ने प्रमाण हो। जीवनशैलीलाई भ्रष्टाचारको प्रमाण मान्ने हो भने पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाट 'डेरा' विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारकै आधारमा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर्याषउन मिल्छ। संसद् सदस्यका रूपमा पाउने पारिश्रमिकबाट उनको डेराको भाडा तिर्न पनि पुग्दैन भने बाँकी खर्च कसरी चल्छ? उनको पार्टीले तिरेको हो भने त्यसको स्रोत के हो? अज्ञात स्रोतबाट तिरिएको हो भने प्रचलित कानुनअनुसार त्यो पनि भ्रष्टाचार ठहर्छ। चर्चामा भएजस्तै दाहालले त्यो घर किनेका हुन् भने त्यसको पनि त स्रोत खुलाउनुपर्छ। के यही आधारमा दाहाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने? (अधिनायकवादी शासन आयो र कथम् त्यो एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको भएन भने दाहालमाथि सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारकै आरोप लगाइनेछ।) जयप्रकाश गुप्तालाई सजाय दिइएकै ताका 'प्रिपेड घुस' र 'एनसेलसँग पैसा मागिएको' समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि भ्रष्टाचार कम त भएको छैन। जीवनशैलीका आधारमा मुद्दा चलाउने हो भने अहिलेका लगभग सबै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ।
यस प्रकारको पटके कारबाहीले भ्रष्टाचार कम पनि हुँदैन। जसरी कर्मचारीको तलब बढाएर भ्रष्टाचार कम हुँदैन त्यसरी नै पटके कारबाही गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन। कडा सजायले भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो भने चीनमा त भ्रष्टाचारै नहुनुपर्थ्यो, झन् बढ्दैछ। कुन विषयमा कस्तो निर्णय गर्दा प्रचलित कुन कानुन उल्लंघन भएको छ र त्यसबाट कति हानि भएको छ भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु र निर्णय हुनुपर्छ। अमूर्त उदाहरण र अनुसन्धान तथा अभियोजन अधिकारीहरूको तजबिजमा भ्रष्टाचार मानिने वा नमानिने व्यवस्थाले समाजलाई झन् भ्रष्ट बनाउँछ। व्यक्तिको प्रवृत्ति भ्रष्ट हुँदासम्म समाज भ्रष्टाचार मुक्त हुन सत्तै्कन। यसैले विधि र निषेधका सबै उपाय भ्रष्टाचार कम गर्न लक्षित भएमात्र सफल हुन्छ। राजनीतिक दलहरू र विचार निर्माताले समाजलाई यो कटु वास्तविकता बताउन र बुझाउन सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई नै सबै समस्याको जड ठान्ने मानसिकताबाट पनि समाज मुक्त हुनु जरुरी छ। भ्रष्टाचारका विषयमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् र सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएका छन्। तर, स्विडेन संसारकै कम भ्रष्ट हुनुले के संकेत गर्छ? समान संस्कार भएको चीन र ताइवान तथा निकट छिमेकी मलेसियाभन्दा सिंगापुरको प्रशासन बढी नै स्वच्छ हुनुलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न अपनाएको उपाय सही होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तजबिज र एकाधिकार अन्त्य गरेर पारदर्शिता तथा जवाफदेही बढाउने हो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने किर्केग्राडको सूत्र अझै उत्तिकै निर्विवाद देखिन्छ।
Posted by Govinda at 8/21/2012 10:51:00 AM No comments:
पाटनढाेकािस्थत यलमाया केन्द्रमा स्वतन्त्र िचनिया वृत्तिचत्रहरू देखाइएका थिए । उद्घाटनमा देखाइएको सुपर गर्ल्स आइतबार दिउँसो पुनः देखाइयो । निर्देशक जियान यी प्रदर्शनमा उपस्थित थिए । अमेरिकन आइडलकै सिको गरेर सुरु गरिएको यो प्रतियोगिता निकै लोकप्रिय भएपछि अहिले बन्द गरिएको छ । सरकारले चिनिया युवामा कुसंस्कार बढ्ने डरले बन्द गरेको बताए पनि खास कारण अर्कै रहेछ र एमएसएस भोिटंङबाट विजेता छान्न पाइने यस प्रतियोगिताले जनताले मतको महत्त्व र स्वाद थाहा पाउलान् भन्ने भयले सरकार तर्सेको रहेछ । पंचायतकालमा विद्यार्थी संगठनहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएकाे संझना भयाे ।
न्यायका नौ िसङ
भारतका १४ जना अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डका ९ वटा सजायलाई आजीवन कारावासमा बदल्न आग्रह गरेका छन् । अज्ञानका कारण गलत निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३ पटक निर्णय गरिसकेको भए पनि सजाय कायमै छ । यसले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्ने हुनाले सजायमा परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
नेपालमा कानुन र न्याय प्रक्रियाका विभिन्न पक्ष विवादास्पद भए पनि न्यायाधीहरूले खासै चासो राखेको देिखएको छैन । यसले पनि कानुन बनाउँदा बढी नै सावधान हुनुपर्ने देिखन्छ र
पुषपकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीको सरकार अरू २० वर्ष चलाउने धाक लगाएछन् । मधेसीले गंगादत्त भ्यागुतालेजस्तै सर्पलाई निम्ता िदएर सत्ता बुझाए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । दाहालको मनसुवा भने थाहा भयाे । किन होला यस्तो अनित्य संसारमा पनि यति अहंकार जागेको ? २० वर्ष शासन गर्नेहरू पनि कोही अजम्मरी त भएका छैनन् ! इतिहासमा अहंकारी शासक धेरैको पतनै भएको वर्णन छ । दाहालकै नेपाली आदर्श जंगबहादुर हुन् वा नेता स्टालिन वा माओ मरेपछि पनि निन्दितै भएका छन् । संसार कसैले जितेको छैन । माने पनि नमाने पनि नियतिले नै खटाएको देिखन्छ ।
Posted by Govinda at 8/20/2012 01:04:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 8/18/2012 08:17:00 PM No comments:
सरकारले रिस उठेका सचिवहरूलाई काम नहुने ठाउँमा सरुवा गरेछ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही सचिवलाई बोलाएर हकारे रे। उनीहरूले मुख्य सचिवलाई नटेरेकाले प्रधानमन्त्रीले हप्काएका हुन् रे। सचिवहरूले सहयोग नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्रीले दिए रे। अझ, पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गर्ने सचिवलाई त कारबाही गर्न तयारीसमेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरिरहेका छन् रे। बाबुराम भट्टराईको यस व्यवहारले गाउँको एउटा पुरानो घटना सम्झायो।
गाउँमा एक जना धनी मान्छे थिए। तिनका सन्तानको भने कुन्नि के कारणले हो उमेरअनुसार शारीरिक र मानसिक विकास भएको थिएन। तैपनि, आमालाई छोराको बिहा गर्ने रहर लागेछ। गाउँकै जात मिल्ने गरिबकी छोरी मागेर बिहा गरिदिए। बिहा त भयो तर छोरा र बुहारीको व्यवहार हेर्दा आमाको नाति खेलाउने रहर पुग्ने लक्षण देखिएन।
उमेर पुग्दै गएपछि केटी त माइतै बस्न थाली। केटाकी आमा पीर मान्न थालिन्। केटी चाहिँ जात्रामात्रामा बढी नै रमाउन थालेकी थिई। आमाले मलाई भनिन् ! लौन बाबु, बुहारी त घरै आउँदिन। गाउँतिर कुरा काट्न थालिसके। तिमीले भनेको मान्छे कि एकपल्ट सम्झाई देऊ ! तिनी मेरी आमाकी साथी थिइन्। उनका छोरा मभन्दा जेठा थिए। बुहारी मेरै दौँतरी। मलाई अलि असजिलो पनि लाग्यो। एक्लै कुरा गर्नु पनि अप्ठेरो मामिला। पहिले केटालाई सोधेँ। 'नआए नआओस् मलाई मतलब छैन अर्को बिहा गर्छु' पो भने।
केटीलाई र हामीभन्दा केही वर्ष पाका अर्का साथीलाई पनि बोलाएँ। केटीलाई किन घर नबसेकी? अलि लाज मानिन्। केही जवाफ दिइनन्। अनि ती दाजुले फकाइफुल्याई गरेर सोधे। उनले एक दिनको घटना सुनाइन् - केटा र केटी बेग्लाबेग्लै ओछ्यानमा सुत्दा रहेछन्। आमाले थाहा पाइछन्। नाति खेलाउन रहरमा बुहारी भित्र्याएकी आमालाई छोराबुहारीको चाला देखेर पीर लाग्यो। उनले छोरालाई बुहारीसँगै सुत् भनिछन्। छोराले आमाको आदेश त पालन गरे तर इच्छा पूरा गरेनन्। आमाले मेसो पाइछन्। अनि मुखै फोरेर संसर्ग गर्न भनिछन्। छोराले दुलही मान्दिन भनेछन्। आमाले दुलहीलाई कसरी तह लगाउने सम्झाइछन्। आमाछोराका कुराकानी केटीले पनि सुनिछन्।
बेलुका भयो। नभन्दै केटा आए। 'मलाई तेल लगाई द' भने। तेल लगाइदिए पछि केटी बिस्तारै खाटको पल्लो छेउमा पल्टिन्। केटा नजिकै सरेर केटीलाई आफूतिर तान्न खोजेछन्। केटी केटाको हात पन्छाएर अर्कोतिर कोल्टो परिछन्। आमाले त्यस अवस्थामा के गर्ने भनेर सिकाएकी थिइनन् क्यारे केटाले ओछ्यानबाटै चिच्याएर आमालाई भनेछन् 'आमा यो त अर्कैतिर फर्की?'
यति सुनाइसकेपछि केटीले उल्टै हामीलाई सोधिन् - त्यस्तो घरमा म के भनेर बस्ने? मसँग उत्तर थिएन। तिनको घरजम भएन। पछि केटीले अर्कै बिहे गरिन्। केटाले पनि अलि परिपक्व भएपछि दोस्रो बिहा गरे।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले वरीयता मिचेर मुख्य सचिव त बनाइदिए तर सम्मान कमाइदिन त सकेनन्। कसैले पनि सत्तै्कन। र कसैका लागि पनि सत्तै्कन। आदर र अदब त आफैँले कमाउने हो। करले माया लाग्दैन। डरले श्रद्धा जाग्दैन। मुख्य सचिवले नै आफ्ना सहकर्मीसँग छलफल गर्न खोजेका भए राम्रो हुन्थ्यो। सामूहिकरूपमा उनीहरू कुराकानी गर्न तयार नभए एक्लाएक्लै भेटघाट गरेको भए हुन्थ्यो। उनीहरूले सहयोग नगर्दा कामै बिग्रेको भए त्यो पनि खुलाएको भए हुन्थ्यो। आफूभन्दा वरिष्ठ सहकर्मीहरूसँग झुकेकै भए पनि उनैको मान बढ्थ्यो। विनयशीलताले हानि त गर्दैन। मातहतका सहकर्मीलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्री गुहार्नु मुख्य सचिवको पदीय मर्यादालाई पटक्कै सुहाएन। कमजोर व्यक्तिले बलियो भएको भान पार्न खोज्छ रे। मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीमा यही हीनताग्रन्थी देखियो।
कति पटक प्रधानमन्त्री गुहार्ने? अनि सचिवहरू बैठकमा आएनन् भन्दैमा तिनले कसुरै गरेको ठान्न मिल्छ? सरकारले अहिले निर्णय त जे पनि गर्ला तर त्यसको नैतिक वैधता नभए झन् बढी बेइज्जत हुन्छ। यति धेरै जना वरिष्ठ सचिवहरूलाई तर्साउन खोज्दा लहरो तान्दा पहरो गर्ज्यो भने के होला? प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी र चित्तबुज्दो निर्णय गरेका भए यस्तो अवस्था उत्पन्नै हुने थिएन। एउटा कमजोरी ढाक्न थप त्रुटि गर्दै जानु भासमा दौडन खोज्नुजस्तो हुन्छ। बाबुराम र लीलामणि असफल भएर त केही बिग्रने थिएन तर तिनले मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवालाई नै धमिलो बनाउने डर देखियो। आमाले ओछ्यानमा पुगेको छोरालाई सिकाउने कुरा धेरै हुँदैन र सिकाउन थाल्ने हो भने छोराको घर पनि हुँदैन। अहिले बलफ्ती कजाइएका सचिवहरूले कुनै कारणले प्रधानमन्त्री फेरिए भने टेर्लान् र?
Posted by Govinda at 8/13/2012 07:37:00 AM No comments:
कुनै बेला कांग्रेसलाइ अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो। अन्ततः त्यही कांग्रेसले राष्ट्रियता जोगाउनु परेको थियो । अहिले कांग्रेसको छवि भ्रष्ट बनाउने खेल भइरहेको छ। अख्तियारले मुद्दा चलाउनुभन्दा पहिल्यै सञ्चार माध्यमले कांग्रेसका केही नेतालाई भ्रष्ट घोषित गरिसकेको थियो। कांग्रेसका सबैभन्दा धनी नेताभन्दा कैयौँ गुना धेरै पैसा कमाएका अरू पार्टीका नेतालाई समाज र सञ्चार माध्यमले भ्रष्ट ठान्दैन। माओवादी नेताको सम्पत्तिको छानबिन उनीहरूले नै गरे हुन्छ। राज्यले हेर्नै पर्दैन। पार्टीका नाममा जति भ्रष्टाचार गरे पनि औँला समाजले औँला उठाउँदैन। अनि पार्टीको पैसा आङ्ग134ना लागि जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ। त्यो भ्रष्टाचार मानिदैन। प्रतिस्पर्धी सहकर्मी भ्रष्टाचारको आरोपमा थान्को लागेकोमा अहिले हर्ष बढाइँ गर्नेहरूले कुनै न कुनै दिन आफ्नो पनि पालो आउँछ भन्ने बिर्सेका छन्। यो समाज र सञ्चार माध्यममा यो पुस्ता पूर्वाग्रहमा आकण्ठ डुबेको छ। सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरिएका ध्वनि र दृश्य कतै बाँकी होलान्। छापिएका अक्षर पनि होलान्। कतिपयलाई लाग्दो हो अरूको इसारामा गरेको काम वा प्रचार कसैले थाहा पाउँदैन। सत्य सयौँ वर्षपछि पनि प्रकट हुन्छ। कुनै दिन कसैले अनुसन्धान गरेछ भने कांग्रेस शब्दलाई नै भ्रष्टाचारको पर्याय बनाउन तस्करतन्त्र कसरी लागि परेको थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ। तस्करतन्त्रका पोष्यपुत्रहरू कसरी कांग्रेस नेताहरूकै आड र अनुहारमा पार्टीको जरो खलबल्याउन सक्रिय भएका थिए भन्ने देखिनेछ।
यत्ति हो कांग्रेसजनमा इच्छाशक्ति भने चाहिन्छ ।
Posted by Govinda at 8/13/2012 07:32:00 AM No comments:
Posted by Govinda at 8/07/2012 02:11:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 8/01/2012 07:40:00 PM No comments: